Anaga waxaa aynu heleynaa su,aalooyin fara badan oo ka imaanaayo waalidiinta oo ku saabsan cabuuqa corvid-19. Waxaa aynu fahan sanahay in xaalada ay abuureyso su,aalooyin badan iyo wal wal. Tani waa xaalad qaas ah taas aynu ku jirno.
Waalidiin badan ayaa doonaya in ay helaan war bixino ku saabsan shaqaalaha ama ilmaha kale xaaladooda caafimaad. Waxaa jiro codsi ku aadan xanaanada caruurta iyo iskuulaadkaba in la siiyo warbixin ku saabsan qofka jiran iyo midka caafimaadka qaba iyo si kastaba ha ahaatee cudurka ay qabaan.
Illaalinta xogaha qarsoodiga ah ee bukaanka ee dalkaan Iswiidhan uma ogolaanaayo in la siiyo iskuulka xanaanada iyo iskuuladkaba warabin ku saabsan cudurka bani,aadamka qabo ama haayo. Macnaheedu waxaa weeye in iskuulka xanaanada iyo iskuulkaba ay hali karaan shaqsi gaar ah xaaladiisa caafimaad. Adiga waa awoodi kartaa in aad ka hor takto oo aad joojiso faafida xanta beenta oo ay mar sinayaan in la qebsado war bixinada caafimaad ee dadka kale.
Gobolka Östergötland waxaa uu joojiyay in ay baahiyaan inta qof ee cudurka uu ku faafay mushtamaca dhexdiisa iyo waxaa kali ah oo la baarayaa dadka qatarta ee ka xanuunsanaya sabababaha ama neef mareenka kuwaas oo u baahan daryeel caafimaad. Waxaa macnaheedu yahay in qofkaas uu la ildaran yahay cudur aan la ogeeyn asaga/ayada kaas uu haleelay.
Heyada caafimaadka dadweynaha taladooda waa in ay ilmaha caafimaadka /ardayda iyo shaqaalaha ay aadi karaan iskuulka xanaanada caruurta,iskuulaadka iyo goobaha shaqo. Waxaa ay quseysaa xataa dadka la kulmay dad qaba calamado xanuun ama ififaalo xumad. Ilmaha/ardayda iyo shaqaalaha kuwaas oo qaba calaamado jiro waxaa ay joogi doonaan guryahooda illaa ay ka caafimaadaan iyo kadibnah waxaa ay sugayaan mudo laba maalin ah inta aysan ku laaban iskuulka xanaanada, iskuulka ama shaqada. Cudur alla iyo cudurkii uu doono ha ahaadee. Xoogaa warbixin guud oo ku saabsan wax aad adigu sameyn kartid si aad uga taxadarto faafida cabuuqaan ama durigaa, tusaale ahaan covid-19 duriga-19 waa:
• Dhaq gacmahaaga in badan oo daxadir kujiro isticmaal shaanbo iyo biyo.
• Isku day in aad ka daxadarto taabashada indhahaaga,sankaaga,afkaaga.
• Ujirso masaafo qofka hadii uu qufacaayo ama uu hindhisaayo
• Ka daxadar salaanta gacanta leeska salaamo
Maxaa yeelay waa in la yareeyaa qatarta faafida cudurka waxaa sare u qaadi doonaa in aan dhowr jeer maalinti in la nadaafadeeyo iskuullaadka xanaanada caruurta iyo iskuulaadka.
Waanu dooneynaa aad qarisato sdida dagmada Norrköping ugu shaqeyneyso oo waliba aad uga bogan karto warbixino dheeraad ah. Wararka si is daba joog ayeey ugu jiraan halkaa. https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html
Anagu waa aynu fahan sanahay in xaaladaan ay tahay mid leesku sheego laakin waan idiin mahad celineynaa si ay xushmad ku jirto
In badan ayaan idin salaameynaa!
Johanna och Maja
Upplagd av Johanna Flodin Karlsson kl. 09:56
Unknown måndag 1 juni 2020 17:07:00 CEST